Izindaba - Igatsha lephathi leHengyi Electric Group, ingqikithi yemicimbi yosuku lwephathi lohambo luka- "Julayi Red" ngo-2020
NgoJulayi 1, 2020 yisikhumbuzo seminyaka engama-99 sokusungulwa kweQembu lamaKhomanisi laseChina. Ukuze sizuze ifa futhi siqhubekele phambili ngamasiko amahle eqembu kanye nomoya wokushisekela izwe, sizosebenzisa kahle umoya wenkulumo ebalulekile kaNobhala Jikelele u-Xi Jinping ngesikhathi ehlola eZhejiang. "Prakthiza inhloso yoqobo", ufundise futhi uqondise amalungu eqembu namakhampasi ukuze afunde ngokujulile, aqonde futhi enze imikhuba yobusoshiyali enezimpawu zamaShayina enkathini entsha, futhi ngokuqhubekayo aqinise ukuqwashiswa kwemibono, ezombusazwe nezenzo "zokugcina ukulangazelela kwasekuqaleni sicabanga ukuthunywa ", futhi sigcizelela ukugcina izikhundla ezikhona, ukuphayona nokulwela ukwenza kahle, ukwenza iminikelo emikhulu ekuzameni ukunqoba ukunqotshwa nokulawulwa kobhubhane, umphakathi wezomnotho kanye nentuthuko yezinkampani. Khuthaza wonke amalungu eqembu nabaphathi ukuba babambe iqhaza emisebenzini yokuphayona nokulwela ukwenza kahle, nokuqhubeka nokudlala indima enhlanganweni yeqembu njengenqaba yempi kanye nephayona nendima eyisibonelo yamalungu eqembu. Ngemuva kocwaningo nesinqumo sikaSihlalo weHengyi Electric Group Lin Hongpu, uMongameli Lin Xihong kanye negatsha leqembu, ngoJulayi 5 (ngeSonto), kwahlelwa umcimbi wosuku lwengqikithi wohambo oluthi "July Red".
Ngehora leshumi ekuseni, eduze neYantou Village, esifundeni saseYongjia, kwaqhamuka isithombe esibaziweyo phambi kwakho buqamama, senza abantu besaba. "Ibutho leshumi nantathu labasebenzi baseShayina kanye nabalimi Red Army" emvuleni enenkungu nenkungu banamandla futhi banamandla, futhi baqala ukutshela umlando okhandlayo nobukhali wezinguquko-idolobha iRed Army eningizimu yeZhejiang!
I-Red 13th Army Memorial iyisakhiwo esidala, saqedwa ngo-2000. Inanela netshe lesikhumbuzo elibabazekayo nendawo yezempi yasendulo. Indawo ezungezwe izihlahla eziluhlaza, yinhle. Umnyuziyamu ukhombisa izinto zomlando zeRed Thirteenth Army kanye nezinto zangempela ezifana nezikhali, imimese nezibhamu ezisetshenziswa amasosha eRed Army!
Ngalo mcimbi wengqikithi yosuku lwephathi, wonke amalungu eqembu athole imfundo enzulu yokushisekela izwe kanye nemfundo yeqembu, futhi banokuqonda okujule kakhulu kwezibopho zabo njengelungu leqembu. Qhubeka uqhubeke nomoya wokuguqula umbuso, wenze umsebenzi wakho ngezinjongo nezinkolelo eziqinile, izinga eliphezulu lobuchwepheshe, kanye nesitayela somsebenzi esiqinile ukuze unikele ekuthuthukisweni kwebhizinisi!